Homeसमाचारआजको विदेशी मुद्राको विनिमयदर, कुन देशको कति पुग्यो? हे’र्नुहोस्
February 20, 2021 admin समाचार 6287
नेपाली बजारमा श’निबार अमेरिकी डलरसहित अन्य केही देशको विनिमयदर ओ&रालो लागेको छ । त्यस्तै आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको ख’रिददर १ सय १५ रुपैयाँ ९५ पैसा तो’किएको छ भने बिक्रिदर १ सय १६ रुपैयाँ ५५ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै आज एक मलेसिया रिंगिट’को खरिददर २८ रुपैयाँ ६६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ८१ पैसा तोकिएको छ । भने आज एक युके पा’उण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६२ रुपैयाँ ७ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६२ रुपैयाँ ९१ पैसा तो’किएको छ।
त्यस्तै’गरी आज एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय ७ रुपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ भने बि’क्रिदर ३ सय ९ रुपैयाँ ११ पैसा तोकिएको छ । जापानी यनको खरि’ददर १० रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ११ रुपैया ३ पैसा तोकिएको छ ।
यो पनि पढ्नु’होस्
लसुन हामीले भान्सामा दैनिक प्रयोग गर्दै आएको चिज हो । यसलाई हामी तर’कारी र दालमा बडी मात्रामा प्रयोग गर्ने गर्छौं । लसुन हाम्रो खानाको स्वाद बढाउन मात्र नभई हाम्रो स्वा’स्थ्यको लागि पनि निकै लाभदायक छ । विभिन्न अध्ययनले भुटेको लसुनले हामीलाई विभिन्न रोगहरुबाट बचा’उन मद्धत गर्ने देखाएको छ ।
पेटको स’मस्या कमस् हरेक दिन भुटेको लसुन खानाले हाम्रो पेटमा ग्यास भरिदैन । यसले गर्दा हामीलाई ग्यास्ट्रि’क जस्तो समस्याले सताउदैन । यसले खाना पचाउन म’द्धत गर्ने भएकाले कब्जियतको समस्या देखी मुक्त हुन सकिन्छ ।
रोग प्रति’रोधात्मक क्षमता बढ्छ’स् हरेक दिन भुटेको लसुन खानाले हाम्रो शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमता बढ्छ । यसमा पाइने एन्टी ब्याक्टेरियल तत्वले विभिन्न प्रकारका ब्याक्टे’रियासँग लड्न मद्धत पुर्याउँछ ।
चिसोबाट बचा’उँछस् तातो तेलमा लसुन पड्काएर शरीरमा लगाउनाले शरीरमा चिसो छिर्न पाउदैन । यसले गर्दा हामीलाई रुघाखो’की जस्तो समस्याले सताउदैन ।दाँतको दुखाइ क’मस् यदी तपाई दाँत दुखेर हैरान हुनुहुन्छ भने दाँत दुखेको ठाउँमा भुटेको लसुन पिसेर लगाउनुहोस । तपा_ईलाई यसले निकै आराम दिन्छ
घर वरिपरी चि’सो ठाउमा पाइने पूदिना निकै उपयोगी छ । पुदिनाले हाम्रो शरिरलाई धेरै नै फाइदा गर्छ । यदि तपाईको कान दु’खेको छ भने यसको रस दुई थोपा राख्दा आराम मिल्छ । त्यस्तै टाउको दुखेमा पनि पुदिनाको रस टाउ’कोमा लगाउदाँ सितल हुन्छ । दाद आएको छ भने निरन्तर पूदिनाको रस लगा’उदाँ दाद निको हुन्छ । उल्टि आएमा पूदिना र निवुवाको रस पिउदाँ उल्टि रोकिन्छ ।
२ चम्चा पूदि’नाको रस १ चम्चा निवुवाको रस २ चम्चा मह मिलायर पिउदाँ पेटका विविध रोग निको हुन्छ । हैजाको समस्या छ भने प्याज, निवुवा ९अमिलो० र पूदि’नाको रस मिलाई पिउदाँ लाभ मिल्छ । पुदिना र रातो माटोलाई मिक्स गरि अनुहारमा लगाउदाँ अनु’हारको चायाँ हराउछ ।
राजेश हमाल दम्पतीको यस्तो भिडियो कसरी बाहिरियो ?(हे’र्नुहोस् भिडियो)
March 19, 2021 admin समाचार 5225
कर्णालीका विकट जि’ल्लाहरुको अवस्थालाई चित्रित गरेको ‘रेलको बाटो’ गीत सार्वज’निक भएको छ । सुरज पण्डितको स्वरमा रहेको गीतको भिडियोमा हुम्लामा मोटर नपुगेको कथा दे’खाइएको छ । भिडियोले कर्णाली प्र’देशको डोल्पा जिल्लाको विकटताको चित्र बोलेको छ
April 10, 2021 admin समाचार 5193
January 10, 2021 admin समाचार 8537
वेवारीसेहरुको व्यव’स्थापन गर्ने विनय जंग बस्नेत र उनले छोरी मानेको उनकी छोरी सपना रोका मगरबीच पछि’ल्लो समय अनेक थरीका चर्चा’परिचर्चा चल्दै आईरहेको छ । यो विषयमा धेरैले धेरै थरीका अनुमान र ग’सिपहरु गर्दै आएका पनि